पूजाको केटाकेटीपना अनि गाली मिडियालाई ? (मज्जाको भिडियो सहित) « Mazzako Online
पूजाको केटाकेटीपना अनि गाली मिडियालाई ? (मज्जाको भिडियो सहित)
कलाकार भैसकेपछि राम्रो मात्र समाचार आउँछ भन्ने छैन । कलाकारले गर्ने सानासाना कुराको पनि समाचार बन्छ । तर, राम्रो समाचार आउँदा भयंकर जस्तो गर्ने, तर थोरै नकारात्मक समाचार आउँदा मिडियालाई नै सस्तो भयो भन्ने बानी कतीसम्म सही होला ।
अभिनेत्री पूजा शर्माले आफ्नो फिल्म ‘प्रेमगीत’का मुख्य अभिनेता प्रदिप खड्का र निर्माता सन्तोष सेनलाई फेसबुकबाट अनफ्रेन्ड गरिन् । स्वभाविक हो, एउटा अभिनेत्रीले फिल्मका मुख्य २ पात्रलाई फेसबुकबाट हटाउँदा समाचार बन्छ । फेरि अहिले पूजासँग सन्तोष र प्रदिपको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने चर्चा पनि छ ।
तर, पूजाले यी दुइलाई रिस उठ्दा अनफ्रेन्ड गर्ने अनी खुशी हुँदा फेरि रिक्वेस्ट पठाउने गर्दिरहिछन् । यसपटक पनि उनले यस्तै गरेकी हुन् रे । उनले त यो आफ्नो बानी नै भएको भन्दै मिडियालाई यस्तो समाचार लेखेर सस्तो नबन्न सुझाव नै दिइन् ।
तर, एकैछिनमा रिस उठ्दा हटाउने र एकैछिनमा राख्ने पूजाको बानी कस्तो होला ? उनले कहिले वुझ्ने । पूजाजी मिडियालाई सुझाव दिनु अघि आफ्नो बानी पो सुधार्ने हो कि ?